Volana iankinan'ny ho avin'ny firenena (2)?
2010-11-08 @ 11:16 in Politika
Dia hivadika amin'ny resaka somary mahazatra ahy amin'izao fotoana izao indray ny tena. Tsy maninona na be aza no tsy mbola nahita ny fizarana voalohany fa mahita foana avy eo hoe efa nisy ny fizarana voalohany tamin'ity lahatsoratra tohizana isak'izay mahatsiaro ity. Manitsaka ny volana novambra isika amin'izao fotoana izao, volana mety hanana ny akony lehibe eo amin'ny tantaran'i Madagasikara noho ny fisian'ilay referendum izay kasaina hotontosaina ny 17 novambra 2010 ho avy izao.
Hetsiky ny Mpitondra fivavahana no voalohany
Vao nigadona ny volana dia ny famoriam-bahoakan'ny Hetsiky ny Mpitondra Fivavahana no nitari-dalana. Niverina ho hitam-bahoaka indray ireo mpitarika tao rehefa nangingina noho ny raharaha 20 mey 2010. Nandrasana izay fahazotoan'ny olona hanatrika izany fotoana teny Antsahamanitra izany ary dia hita fa fahombiazana ny fotoana na dia fantatra tsara aza ny mety hiavian'ny orana ary ankalamanjana ny nanatontosana azy, tahaka ny tsy nisy ilay fomba fiteny hoe fotoam-pahavaratra ka ny maraina ihany. Misongadina hatrany moa fa fotoam-pivavahana no natao ary nisy mihitsy aza ny fandohalehana izay fomba tsy mahazatra loatra ny protestanta reforme (fa fanaon'ny hafa sy ny loterana kosa rehefa mandray ny fanasan'ny Tompo); manoratra izany aho satria fantatsika mazava tsara fa ny mpitandrina ao amin'ny reforme no maro amin'ireo mpitarika ny Hetsiky ny Mpitondra Fivavahana. Tsy nisy ny artista (evanjelika) nanafana ny fotoana hisintonana olon-kafa hijery fampisehoana ohatra fa dia karazana litorjia ranoiray no natao. Nanamaro an'isa ny mpanatrika teny Antsahamanitra ny avy amin'ny mpanohana ny ankolafy telo.
Nifanindran-dalana tamin'izany koa dia nisy vondrona mpitondra fivavahana fantatra endrika amin'ny fitarihana fotoam-pivavahana miara-dalana amin'ny mpandrombam-pahefana ankehitriny nikarakara fotoana nifanindry tamin'io fotoana notontosaina teo Antsahamanitra io ka ny Lapan'ny Kolontsaina sy ny Fanatanjahantena kosa no nanaovana izany. Mpitondra fivavahana avy amin'ny anaram-piangonana isan-karazany no tao ary artista evanjelika maro dia maro sy malaza no nasaina hanafana ny fotoana, izay nambara ho fampisehoana evanjelika no hibahan-toerana. Heverina noho izany fa ireo mpihira ireo no nentina nanintonana ny olona ankoatra ny maha-toerana mitafo tsy matahotra izay orana avy io Lapa io. Na izany aza dia tsy tena be loatra araka ny nantenain'ny mpikarakara ny olona nankao, raha ny fomba fakan'ny fahitalavi-panjakana ny sary nampita mivantana ny fotoana tao, no itarafana ny zavanisy tao. Azo lazaina noho izany fa ny Hetsiky ny Mpitondra Fivavahana no nitoko teto.
Ny alarobia 3 novambra indray dia ny kianja filalaovana rugby teo Antanimena, dia ny kianja Malacam izany, no nifamotoan'ny Ankolafy telo tamin'ny mpanohana azy. Maro ihany ny olona namaly ny fanasana amin'ny maha-andavanandro ny fotoana ary hita fa tsy tratry ny velam-pandrika rehateo ny mpitarika. Inona moa ilay velam-pandrika? Izay efa nambaran'ny mpitarika ny Ankolafy Ravalomanana tao amin'ny radio an-tserasera iray ihany: nokendrena ny hisian'ny fifamaliana sy ny fifandirana teo amin'ny mpitolona sy ny mpankafy baolina lavalava. Izay mahatsiaro no mahalala fa ny faran'ny volana oktobra no nilazana ny hanekena hanaovana fihaonana politika tao amin'ity kianja ity. Toa nisy mihitsy aza ny fampirisihan'ny gazety sasany hampiasain'ny Ankolafy telo ny kianja avy hatrany ny faran'ny herinandro saingy tsy voafandrika tamin'izany ny ankolafy telo. Ny andro nandrisihana manko dia mbola nisy lalao baolina lavalava tao amin'io kianja io ka raha niditra tao ny ankolafy telo dia toy ny migafy ny revin'ireo mpankafy baolina lavalava ireo. Ny alarobia fantatra fa tsy misy lalao tao vao nampiasaina ny kianja. Tsy hatao mahagaga intsony noho izany raha holavina indray ny fangatahana hampiasana ny kianja amin'ity herinandro ity.
Mbola nanamarika ity fotoana ity hatrany ny tsy fisiana artista malaza nokaramaina hanafana ny lanonana fa dia kabary politika no somary nibahan-toerana. Tsy mety kosa ny fahadisoam-potoana izay aman'ora mihitsy fa tsy mba minitra intsony. Tokony ho ny ora lazaina ihany no ezahina hanombohana ny fotoana fa tsy fanajana ny mpanatrika mihitsy ilay fahatarana izay mety hiteraka fahasorenana. Nisongadina nandritra ny fanomanana ity fotoana ity ny nampiasana ny haino aman-jery isan-karazany hiantsoana ny vahoaka ka mety ho antony iray naharesy lahatra ny olona hihevitra fa ho matotra amin'izay ny Hetsika ka nahatongavany teny an-toerana. Na tsy feno aza ny kianja dia azo lazaina ho fahombiazana mitohy ho an'ny Ankolafy telo io fotoana teo amin'ny kianja Malacam io. Tsy maintsy manao ny valim-panafihana amin'izany ny eo amin'ny fitondrana hitazonany ny mpankasitraka azy ho ao am-balany mandrakariva.
Olom-Pirenena Mendrika na OPM
Taorian'ireo fotoana roa teto Antananarivo ireo dia nivoaka tamin'ny fahitalavitra maro teto Antananarivo ny fandaharana manokana karazandrazan'ny karakarain'ny Prezidansa "hanomezana valisoa" Olom-Pirenena Mendrika iray. Fitsidihana nataon'i Andry Rajoelina ilay mpangataka iray tsy takon'ny maso tamin'ny androny teny Antaninarenina tany amin'ny misy azy, nahazo trano vaovao sy hiampy fanaka aoriana kely, no naseho ny rehetra tamin'izany. Mazava loatra fa raha miteny hoe trano efa vita sy azo onenana dia efa nisy fotoana mialoha nanorenana io trano io fa eo kosa ny fotoana namborahana azy. Na inona na inona fanadrohadroana sy fanakianana ary fanasoketana avy amin'ny mpiserasera hafa mikasika ny fihetsika tamin'io nanomezana trano olona iray "tsy nandoa hetra hatrizay niainany manaporofo ny maha-olom-pirenena mendrika azy" io dia nampihetsi-po ny sarangan'olona sasany ny toy ireny. Tsy azo tsinontsinoavina velively izany ary hita tokoa ny maha-spesialita resaka dokambarotra an-dranamana. Tsara ny valim-panafihana teto satria hahatsiaro hatrany ny sarangan'olona "madinika" fa tena manampy azy sy mahatsapa ny filany ilay rangahy io ka mendrika ny hotohanana.
Fampanantenana vaovao indray
Niverimberina tamin'ny fahitalavitra isan-karazany koa fa hifampitafa amin'ny vahoakan'Antananarivo ny filohan'ny Fahefana Avon'ny Tetezamita FAT ny Asabotsy 6 novambra 2010 izay hotontosaina hatrany ao amin'ny Lapan'ny Kolontsaina sy ny Fanatanjahantena, toerana ankafizin-dry zalahy tokoa ankoatra ny Toeram-pivoriana Iraisam-pirenena etsy Ivato seranana. Nankalazaina fatratra io fotoana io tahaka ny hanakonana ilay lahatsary niely vetivety teto amin'ny aterineto nahavoarohirohy mpitondra fanjakana ambony eto Madagasikara. Tena anaty adin-tserasera tanteraka indray amin'izao fotoana izao ny eto Madagasikara. Raha vao izay no resahina dia hanana ny tombon-dalana hatrany ny eo amin'ny fitondrana sady efa mahay azy rahateo. Dia ireny aloha izy ireny, fampanantenana maro no nivoaka tahaka ny fananganana orinasa goavana indrindra famokarana simenitra eto amin'ny Oseana Indiana, ny fananganana trano mora vidy, ny fampihenana ny vidin-tsiramamy...
Ny zavatra iray nanaitra ny maso tao anatin'izany dia ny fitovian'ny lokon'afisy fanentanana ny ENY sy fanentanana ny olona hifidy: samy manga tanora ny loko aoriana. Io toe-javatra io no manamarika fa tsy fifaninanana eo amin'ny ENY sy ny TSIA no hatao amin'io 17 novambra 2010 fa fifaninanana eo amin'ny hifidy sy ny tsy hifidy ka ny mifidy dia karazana fanekena ny fitondran'i Andry Rajoelina ary ny tsy mifidy kosa fandavana izany fitondrana izany. Mahazo mandresy lahatra ary mananjò amin'izany ny tsirairay fa tsikaritry ny tena ihany izany. Hita rahateo ihany koa fa maro tamin'ny mpiaradia amin'ny eo amin'ny fitondrana ankehitriny no ao anatin'ny komity mpanohana ny TSIA izay mampitakemotra ny olona tsy hazoto handatsa-bato velively izany.
Araka ny hita amin'ny gaety moa dia nirotsaka mivantana ho amin'ny fanentanana ny olona hifidy ny filohan'ny FAT ary mitety faritra amin'izay ho amin'izany fitsapa-kevi-bahoaka izany. Mazava rahateo fa dia tokony ho kihondalana eo amin'ny tantaran'i Madagasikara io amin'ny 17 novambra io ho an'Antananarivo sy ny manodidina amin'ny fahamaroana na fahavitsian'ny mpandatsa-bato amin'io fotoana io. Ninia nanoratra hoe Antananarivo sy ny manodidina aho satria io no akaiky vilany sy fetra itarafana ny safidy tokoa fa ny tany lavitra andriana tsy hay intsony ny faneriterena sy ny fingampingana mahazo ny olona any. Na izany na tsy izany dia malemy dia malemy tokoa ny tetiky ny ankolafy telo amin'izao fotoana izao ankoatra ny fanentanana ny olona tsy hifidy. Inona ny paika hafa sa aleo milamina tahaka izay ihany? Ankehitriny aloha dia tsinjo fa ho tontosa io fotoana io fa ny taha-pahavitrihana sisa no baraingo na dia fantapantatra ihany aza matoa miditra antsehatra mihitsy ny laharana voalohany eo amin'ny fitondrana.
Jentilisa 8 novambra 2010, amin'ny 13:15